Tattoo Scorpion leh ubaxyo: ururinta naqshadaha | Tattoo
Fernando Prada | 26/07/2021 09:49 | Tattoos Xayawaan ah, Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
Dunida tattoos -ka waxaa jira walxo taxane ah oo qabta qodobbada ugu horreeya qiimeynta naqshadaha ugu caansan waxaana dalbaday daraasadaha adduunka oo dhan loo qaybiyey. The Tattoo tattoo iyo sidoo kale tattoos kacay waa laba tusaale cad oo tan ah.
Hadda, maxaa dhici lahaa haddii aan isku darno? The tattoos scorpion leh ubax way ka caansan yihiin intaad filan karto.
1 Macnaha tattoos -ka -dabaqlaha leh ubaxyada
2 Sawirrada Tattoos of Scorporp with Roses
Macnaha tattoos -ka -dabaqlaha leh ubaxyada
Laakiin aan bilowno bilowga, maxay ka dhigan yihiin tattoos -ka -dabaqlaha? Dalalka uu xayawaankani dabiici yahay, waxaan ku arki karnaa dhaqan soo koraya oo ku xeeran, sidaas darteed, waa iska caadi in bulshadu ku dartay khuraafaadyada iyo halyeeyada. Markaa, dabaqalaqeedka waxaa loo arkaa astaan ​​ilaalin iyo dhimasho labadaba.
Dhaqamada sida Masaari hangarallaha waxaa loo arkayay inuu yahay nooc naxariis leh oo suntiisii ​​la isticmaalay, iyo waxyaabo kale, si ay u keento in haweenku dhalaan. Aad buu u qaddarin jiray ilaa Isis lafteeda lahaa laba dabaqallooc oo kale ah ilaalo.
Halka dabaqalluhu uu yahay xayawaan leh qarash astaan ​​qoto dheer leh oo ay ugu wacan tahay muuqaalkiisa, dhaqankiisa iyo astaamihiisa; ubaxa waa mid ka mid ah ubaxa ugu taatoobka badan adduunka. Oo weliba waxay leedahay macnayaal fara badan oo kala duwan iyadoo ku xiran midabka timaheeda. Maqaalkan waxaan ku soo ururinnaa nooc kasta oo tattoos scorpion ah ubaxyo.
en el Buddhism waxaan kaloo helnaa tixraacyo arthropod -kaan sida astaanta nabadda in uu yahay uun hanjabaad ama weerar marka uu dareemo halis.
Ogaanshaha tan, waa wax iska caadi ah in dadka leh tattoo shabeel ay leeyihiin shakhsiyad ilaalin ah ama "ilaaliye" si ay u daryeelaan kuwa ugu liita uguna difaaca badan. In kasta oo aanan hilmaami karin dabeecadda ay leedahay iyo in ay sidoo kale awooddo calaamad u ah xanuun ama dhimasho gaar ahaan dadka waayeelka ah, carruurta iyo dadka caafimaadkoodu liito.
Caadiyan, dadka qoorgooyaha ku xardhan (meel kasta oo ay u qaadaan) waxay u muuqdaan inay yihiin dadka cidlada ah ee raadinaya jidkooda inkasta oo uu jiro xanuun ama kelinimo ay tani keeni karto. Waxay ku sifoobaan ahaansho xoog leh oo madaxbannaan maaha iyada oo aan ilaawin kuwa ku xeeran.
Dhanka kale, waxaan leenahay tattoos -ka ubaxa. Aan ku bilowno sharraxaad xoogaa ah macnaheeda; Dhammaanteen waxaan la dhacsan nahay ubaxyada sababta oo ah qaabkooda iyo urkooda; yihiin qurux badan oo jilicsan laakiin qodaxdoodu waxay ina xusuusineysaa inay noqon karaan "Khatar" sida ay noo jeexayaan oo dhiig nooga dhigayaan.
Markaa waxaan fahmi karnaa dadka leh tattoo -ga loo yaqaan 'Rose tattooed', dadka in, hal mar noloshiisa, waxay ahayd inay "abuuraan" qodaxyo si ay naftooda uga ilaashadaan dunida ku xeeran. Laakiin, markii ay qaangaadheen iyo markay «way barwaaqoobeen«, Waxay noqdeen ubax qurux badan in waxay nagu soo jiitaan quruxda (gudaha iyo dibaddaba), urinta, habka ahaanshaha ama fikirka, laakiin micnaheedu ma aha inay soo mareen xaalado aad u adag noloshooda oo u beddelay dad aan ku naqaanno qodaxdoodii oo inaga jili kara dhiigna na gelin kara.
Markaan ka hadleyno tattoos scorpion leh ubax Annagu si gaar ah uguma tilmaamno hangarallahan ku dhex milmay ubax, in kasta oo ay run tahay in nashqadda noocan ahi aad u baahsan tahay. Dad badan ayaa sharad ku gala wax ka beddel hangaadhihii caadiga ahaa si aad ugu beddesho dawadeeda rose. Sidan, waxaan ku tirtiri doonnaa nuxurka halista ah ee aan la saadaalin karin ee arthropod -ka waxaanna ku dari doonnaa quruxda iyo macaanka ku xeeran ubaxyada.
Dadka qoorgoodu ku xardheen ubaxyo meeshii ay tahay in dawadu noqoto, waa caadi dadka oo leh a shaqsiyad faraxsan oo dhow sida ubax laakiin maxaa kama waaban doonaan inay soo saaraan "tweezers" marka arrimuhu xumaadaan ama dareemaan in dadka kuugu soo dhowaada ay sidaas ula sameeyaan ulajeeddo qarsoon ama xitaa waxyeello ama dano gaar ah.
Isku -darka labadan shaabadood ayaa muujinaya in qof kara koraan oo horumaro gudahood ah deegaanno ka sii adag oo ka sii daran in aan qiyaasi karno iyo waxa taas maaha inay noqoto qof xumaan leh ama doonaya inuu wax yeelo dadka kale, sida inta badan la rumaysan yahay.
Hadda aan aragno xoogaa fikrado ah oo ah halka aan ku xardhan karno naqshadahaan, in kasta oo aan kaaga tagnay sawirro qaar leh fikradaha tattoo -yadaas. Isticmaalayaasha ku shaabadeeyey scorpion -ka Rose, badanaa waxay ku sameeyaan gacmaha hore ama quadriceps. ka marka hore maxaa yeelay ma aha aag aad u xanuun badan iyo meesha aad awooddo si cad u arag naqshadda tattoo iyo segunda waayo ahaanshaha aag aad u ballaaran taas wuxuu qirayaa naqshad weyn oo faahfaahsan.
Sidoo kale waa wax aad caadi u ah in la helo hangarallayaal ay weheliyaan ubaxyo kala duwan oo qurxiya tattoo ama la socda xayawaanka laftiisa. Jaantuska ku lifaaqan qodobkan waxaan ku arki karnaa sida labada fursadood ay ugu egyihiin jirka aadanaha. Ilaa aynu ka midowno labada curiye ma beddelayno ama beddelayno macnaha asalka ah ee istiraatiijiyada tattoos iyo sidoo kale tattoos kacay.
Marka la soo koobo, naqshadaha iyo aagagga lagu xardhi karo hangarallayaal leh ubaxyo waa badan yihiin waana kala duwan yihiin, mid walba waxay ku xiran tahay inuu taas siiyo taabasho shaqsiyeed taas oo ka dhigi doonta gebi ahaanba kala duwan oo gaar ah.
Sawirrada Tattoos of Scorporp with Roses
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos Xayawaan ah » Tattoo Scorpion leh ubaxyo: isku dhaf aan la filayn
Tattoo buuraha, waa maxay macnahoodu?